ကေအိုင်စီ » သတင်း
မူလစာမျက်နှာ » Archive by Category
ကရင်ပြည်နယ် ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အလုပ် ရုံဆွေးနွေးပွဲတွင် အချက် ၅ချက်သဘောတူ
မေလ ၂၄ရက်၊ ၂၀၁၃ခုနှစ်။ စောထွန်းလင်း (ကေအိုင်စီ)
ကရင်ပြည်နယ်၊ ဘားအံမြို့၌ မေလ ၂၀ရက်မှ ၂၁ရက်နေ့အထိ ကျင်းပသည့် ကရင်ပြည်နယ်ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲတွင် အခြေခံအချက် ၅ချက်ကို သဘောတူညီမှုရရှိခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။
KDHW နှင့် ပြည်ထောင်စု အဆင့် အစိုးရကျန်းမာရေး ဒုဝန်ကြီးတို့ ဇွန်လအတွင်း တွေ့ဆုံမည်
မေလ ၂၄ ရက၊် ၂၀၁၃ ခုနှစ်။ စဖန်းရှောင်း ( ကေအိုင်စီ)
လာမည့် ဇွန်လ ၂၅ ရက်နေ့မတိုင်မှီ မြန်မာ အစိုးရ ပြည်ထောင်စုအဆင့် ကျန်းမာရေး ဒုဝန်ကြီး ဒေါက်တာ သိန်းသိန်းဌေးနှင့် တွေ့ ဆုံရန်ရှိသည်ဟု ကရင်ကျန်းမာရေးနှင့် ကယ်ဆယ်ရေးဌာန(KDHW)က ယနေ့ ပြောကြားလိုက်သည်။
ဒေါ်နန်းစေအွာကို လူမှု ထူးချွန်ဆုချီးမြှင့်
မေလ ၂၃ရက်၊ ၂၀၁၃ခုနှစ်။ စဖန်းရှောင်း (ကေအိုင်စီ)
ကရင်ပြည်နယ်၊ ဘားအံမြို့နယ် ပြည်သူ့ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် နန်းစေအွာကို လူမှုထူးချွန်သူအဖြစ် ကရင်ရဟန်းတော် များအသင်းမှ ယမန်နေ့ မေလ ၂၂ရက်နေ့က လူမှုထူးချွန်ဆု ဂုဏ်ပြုချီးမြှင့်လိုက်သည်။
ကယားပြည်နယ်အတွင်း ဒေ သခံအချို့ အစိုးရဌာနအပြင် KNPP သို့ အခွန်ငွေပေးဆောင်ရ
မေလ ၂၁ရက်၊ ၂၀၁၃ခုနှစ်။ (ကေအိုင်စီ)
ကယားပြည်နယ်ရှိ ကျေးရွာအချို့အတွင်းမှ ဒေ သခံရွာသားများသည် မြန်မာအစိုးရဌာနအပါအ၀င် ကရင်နီအမျိုးသားတိုးတက်ရေးပါတီ (KNPP)မှ အဖွဲ့ဝင်အချို့ထံသို့ အခွန်ငွေများ ပေးဆောင်ရသော ကြောင့် အခက်အခဲများနှင့်ကြုံတွေ့နေရကြောင်း လောပိ တမြို့နယ်နေ ဒေသခံများထံမှ သိရသည်။
မေလ ၂၁ ရက၊် ၂၀၁၃ ခုနှစ်။ စဖန်းရှောင်း ( ကေအိုင်စီ)
ထိုင်း – မြန်မာနယ်စပ် မယ်လဒုက္ခသည် စခန်းအတွင်းရှိ ရပ်ကွက် A-5 အတွင်း နေထိုင်သူ သားမက်မှ ယောက်က္ခထီးကို ဓားဖြင့် ထိုးသတ်သည့် အမှုတစ်ခု မေလ ၂၀ ရက်နေ့ ည၈ နာရီခွဲ အချိန်ခန့်တွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေသော အကြမ်းဘက် ပဋိပက္ခများ အား ဥပဒေ စိုးမိုးရေး အခြေခံမှ သုံးသပ်ခြင်း အပိုင်း (၁) နိဒါန်း
ဒီမိုကရေစီကို အသွင်ကူးပြောင်းနေ သည်ဟု ကြွေးကြော်ဖော်ဆောင်နေသော ဦးသိန်းစိန်အစိုးရ လက်ထက်တွင် တိုင်းရင်း သားပြည်နယ်များ၌ စစ်မှန်သည့် ပြည် တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးရရန် အလားအလာ မတွေ့ရသေး။
ဘိလပ်မြေစက်ရုံတည်ဆောက် မည်ကို မိကရင်ရှိသံဃာနှင့် လူထု(၁၄၀၀)ကျော်ကန့်ကွက်
မေလ ၁၈ရက၊် ၂၀၁၃ခုနှစ်၊ ကေအိုင်စီ။
ကရင်ပြည်နယ်၊ ဖားအံမြို့ မိကရင်ကျေးရွာ အနီးတွင် (SHREE CEMET COMPANY) မှ ဘိလပ်မြေစက်ရုံတည်ဆောက်မည်ကို ကန့်ကွက်သည့်အနေဖြင့် မိကရင်ကျေးရွာအုပ်စု အတွင်းရှိ သံဃာနှင့်လူထု(၁၄၀၀)ကျော် လက်မှတ်ထိုး၍ မြန်မာအစိုးရထံသို့ ကန့်ကွက်စာ တင်လိုက်ပြီဖြစ်သည်။
မေလ ၁၄ရက်၊ ၂၀၁၃ခုနှစ်။ စောခါးစူးညား (ကေအိုင်စီ)
ကရင်ပြည်နယ်၊ ဖာပွန်မြို့နယ်၊ ထီးသဒေါ့ထာ့ကျေးနယ် သံလွင်မြစ်အတွင်းရှိ ဟတ်ကြီးအနီး တောင်ကြားတွင် ဆည်တည် ဆောက်ရန် ထိုင်းနိုင်ငံ၏ လျှပ်စစ်ထုတ်လုပ်ရေး အာဏာပိုင်အဖွဲ့ (Eletricity Generating Authority of Thailand-EGAT) ကုမ္ပဏီမှ လာရောက်၍ တိုင်စိုက်ထူထားသည်ဟု ဒေသခံ များက ပြောသည်။
ဖက်ဒရယ်ဂျာနယ် ပထမ ဦးဆုံးအကြိမ် စတင် ထုတ်ဝေတော့မည်
မေလ ၁၄ရက်၊ ၂၀၁၃ခုနှစ်။ စောထွန်းလင်း (ကေအိုင်စီ)
ညီနောင်တိုင်းရင်းသားများဖက်ဒရေးရှင်း(NBF) က ဦးဆောင်၍ ပထမဦးဆုံး ထုတ်ဝေမည့် ဖက်ဒရယ်ဂျာနယ် မိတ်ဆက်ပွဲ အခမ်း အနားကို ယနေ့ မေလ ၁၄ရက်နေ့မနက် တွင် ရန်ကုန်မြို့၊ တော်ဝင်နှင်းဆီ စားသောက် ဆိုင်၌ ပြုလုပ်သွားခဲ့ကြောင်း သိရ သည်။
ထိုင်း-မြန်မာနယ်စပ်ဂိတ်အဖြစ် ထီးခီးဂိတ်ကို ထပ်မံဖွင့်လှစ်
မေလ ၁၃ရက်၊ ၂၀၁၃ခုနှစ်။ စဖန်းရှောင်း (ကေအိုင်စီ)
ထိုင်း-မြန်မာ စီးပွားရေးပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ရန် ရည်ရွယ်ပြီး တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး ထားဝယ်ခရိုင်၊ မေတ္တာမြို့နယ်ခွဲအနီး၌ ထီးခီးအမည်ရှိ တရားဝင် နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးဇုံဂိတ်တစ်ခုကို မေလ ၁၁ရက်နေ့တွင် မြန်မာအစိုးရမှ ထပ်မံပြီး တရားဝင် ဖွင့် လှစ်လိုက်ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
Page 1 of 2021234...102030...»Last »
April CD News 2013
လေလ ၁၆ရက်နေ့က ဖာပွန်ခရိုင်အတွင်း လေပြင်းမုန်တိုင်း တိုက်ခတ်သဖြင့် လူနေအိမ်များ ပျက်စီးသွားသည့် ဓါတ်ပုံမှတ်တမ်း	Get the Flash Player to see the slideshow.
ဘားအံမြို့နယ်၊ ခလောက်နို့ကျေးရွာတွင် မေလ ၇ရက်နေ့က ပြုလုပ်သော ၄၃ကြိမ်မြောက် ကရင်စာပေနှင့် ယဉ်ကျေးမှုသင်တန်းဆင်းပွဲ ဓာတ်ပုံမှတ်တမ်း။	Get the Flash Player to see the slideshow.
မွန်ပြည်နယ်၊ မော်လမြိုင်မြို့ရှိ Strand Hotel တွင် ဧပြီလ ၂၅ရက်နေ့မှ ၂၇ရက်နေ့အထိ ကျင်းပပြီးစီးခဲ့သည့် တိုင်းရင်းမီဒီယာညီလာခံ ဓာတ်ပုံမှတ်တမ်း။	Get the Flash Player to see the slideshow.
နောက်ဆုံးထွက် စာစောင်	ကရင်တမျိုးသားလုံး၏နေ့ထူ။နေ့မြတ် Days of Special Significance of Karen people	“၂၀၀၇ခုနှစ်၊ မတ်လ ၃၁ရက်နေ့က ကွယ်လွန်ခဲ့သူ ကရင်အမျိုးသားကာကွယ်ရေး တပ်ဖွဲ့(KNDO) ဗိုလ်မှူးချုပ်မန်းကျော်သောင်း၏ ဘ၀တစိတ်တပိုင်း စာအုပ်”	သနူးထူးဂျာနယ် (August, 2011)	Archive
Recent Commentssuesharaung on ကယားပြည်နယ်အတွင်း ဒေ သခံအချို့ အစိုးရဌာနအပြင် KNPP သို့ အခွန်ငွေပေးဆောင်ရpnwara on ဘိလပ်မြေစက်ရုံတည်ဆောက် မည်ကို မိကရင်ရှိသံဃာနှင့် လူထု(၁၄၀၀)ကျော်ကန့်ကွက်သံလွင်ခက် on ဘိလပ်မြေစက်ရုံတည်ဆောက် မည်ကို မိကရင်ရှိသံဃာနှင့် လူထု(၁၄၀၀)ကျော်ကန့်ကွက်U Thein Win on ဖက်ဒရယ်ဂျာနယ် ပထမ ဦးဆုံးအကြိမ် စတင် ထုတ်ဝေတော့မည်Sa on အယ်ဒီတာ့အာဘော်Agga on ဘုရင့်ညီနောင်ဂူ ဘုရားဖူးများ နေ့စဉ် လာရောက်လည်ပတ်ကိုစော on အသက်မပြည့်ဘဲ စစ်သား အဖြစ် ခေါ်မိသူကို KNU ပြန်လွှတ်ပေးsawnay on မာယာတွေပေါ်မှာ သွေးပျက်ပြီးတော့ အိပ်မနေနဲ့s'Maung Chain on မေလကုန်တွင် ၉ကြိမ်မြောက် ကရင်အမျိုးသားစည်းလုံး ညီညွှတ်ရေး နှီးနှောဖလှယ် ပွဲ ကျင်းပမည်thanshwe on မေလကုန်တွင် ၉ကြိမ်မြောက် ကရင်အမျိုးသားစည်းလုံး ညီညွှတ်ရေး နှီးနှောဖလှယ် ပွဲ ကျင်းပမည် Copyright © Karen Information Center |